Imaaraadka oo qorsheynaya inuu dhiso dhuun shidaal oo isku xira Itoobiya iyo Eritrea – Madal Furan
Hoy > Warka > Imaaraadka oo qorsheynaya inuu dhiso dhuun shidaal oo isku xira Itoobiya iyo Eritrea
Imaaraadka oo qorsheynaya inuu dhiso dhuun shidaal oo isku xira Itoobiya iyo Eritrea
Editor August 11, 2018 August 11, 2018 Warka 0
Madal Furan – Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa qorsheyneysa inay dhiseyso dhuun shidaal oo isku xira magaaladda Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo magaalada Dekeda leh ee Assab, iyadoo tani ay calaamad u tahay saameynta wadamada Khaliijka ay ku yeelanayaan dalalka Geeska Afrika.
Itoobiya ayaa bishii June bilowday inay si tijaabo u soo saarto Saliideeda oo laga helay Keydka Koofurta Itoobiya, gaar ahaan Gobolka Soomaalida, waxaana ay u baahnaan doonta in loo maro Eritrea si ay u dhoofiso.
Warbaahinta dowladda Itoobiya ee Fana ayaa shaacisay kulan dhex maray Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed iyo Wasiiru dowlaha arrimaha Iskaashiga Caalamiga ee Imaaraadka Carabta haweeneyda lagu magacaabo Reem Al Hashimy, kaasoo looga hadlay qorshaha Imaaraadka Carabta ku maalgelinayo dhuun shidaal oo isku xiri doona magaalooyinka Addis Ababa iyo magaalada Assab.
Tallaabada Imaaraadka Carabta ku dhisayo dhuun shidaal oo isku xirta Addis Ababa iyo magaalada Assab ee Ertirea ayaa qeyb ka ah heshiisyo saddex geesood ahaa oo dhex maray dowladaha Imaaraadka, Itoobiya iyo Eritrea.
Imaaraadka Carabta ayaa door weyn ku lahaa heshiiskii dhex maray Itoobiya iyo Eritrea oo ay ku soo afjareen colaadii 20-ka sano u dhaxeysay, waxaana labada dal u bilowday xiriir diblomaasiyadeed iyo iskaashi.
Is bedelada ka socda Gobolka ee ku saleysan loolanka juquraafiga ayaa u muuqda mid marba marka ka dambeysa ay saameyntiisa ay sii xoogeysaneyno, iyadoo Imaaraadka uu si weyn u wado olole ka dhan ah dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti.
Booliska New York oo sheegay magaca ninkii qaraxa ka danbeeyey
AMISOM oo caawa u kala dab qaadeysa Jawaari, Farmaajo iyo Kheyre
Madaxweyne Farmaajo oo magaaladda Addis Ababa kaga qayb gelaya shir muhiim ah